China All Solid Wood Chest yeMadhirowa Ekugara Kamuri yekurara Yemubhedha Nightwatch # 0103 Kugadzira uye Fekitori | Yamazonhome
Yese Solid Wood Chest yeMadhirowa Ekugara Kamuri yekurara Yemubhedha Nightwatch # 0103
Zita: Chest yemadhirowa
Muenzaniso nhamba: Amac-0103
Kukura: 600mm * 400 * 960mm
Tenon uye tenon chimiro + chakasimba huni furemu
Iyo huru yezvinhu ndeye chena oak iyo yakasimwa kwemazana emakore. Iyo ine yakaoma kuumbwa, yakakwira mhepo-yekuomesa density, mapatani akanaka uye yakanaka kuunganidza kukosha. FAS-giredhi yakatumirwa chena oak, seimwe yeanokudzwa ari mudondo, ine kugadzikana kwakasimba uye kugadzikana, uye yakasarudzika Iyo yakanyorova-yakaita gomo-yakaita yemapuranga dhizaini inopa kuwedzera kusimba uye zvakasikwa hunhu, uye huwandu hwese kabhodhi muviri wakadzikama uye hauna kubvunda. kunzwa uye kunogara.
Kona yekutenderedza kurapwa
Hwakanaka umhizha kutenderera kona dhizaini
Iyo micheto yekabineti yakatenderedzwa uye yakatenderedzwa kuitira kunyatso kudzivirira kubhowa kukuvara. Iyo yemukati neyekunze nzvimbo inosaswa ne varnish, anti-corrosion uye kushorwa kwemvura, 360-degree polishing isina makona akafa, uye chimiro chakafanana. Iyo yakapusa dhizaini inowanzo kuve inokwanisa kumira kupora nguva, nemitsara yakachena, yakajeka uye yakapusa ruvara, Iyo yakasarudzika maitiro, izere neNordic minimalism.
Yakakwirira-mhando yemhangura mubato
Iwo akasimba matanda dhirowa nemhangura anobata ari nyore uye akasarudzika. Mushure memakumi mashanu enguva yekukorobha zvine hungwaru, iyo yakatsetseka nzvimbo isina barbs, iye mastering proofing akadzokorora kakawanda ka15, kugadzira kurongeka kwakadaro. Iwo madhiri edhivha anochengeterwa pamwe nekuwedzera majoini, Chaizvoizvo kudzikisa mukaha, zvinobudirira kudzivirira huni kubva kutsemuka nekukuvara. Yakagadzirwa yendarira mubato inogara yakasimba uye haisi nyore kuita ngura.
Madhirowa mazhinji muhukuru hwakasiyana
Multi-dhirowa dhizaini, ine simba yekuchengetedza basa, nayo, imba inova yakashambidzika uye yakashambidzika mune imwe nguva. Iyo hombe bhodhi yakatwasuka uye izvo zvinhu zvazara, uye hapana chigunwe chakabatana bhodhi, icho chinogona kuchengeta zvinhu nemabhuku, uye zvine simba kugona. Inogona kushandiswa semubhedha wedhirowa kabati, yekurara TV makabati, yekutandarira TV padivi makabati, ane akasiyana collocations uye mamirioni ekushandisa. Yakavanzika dhirowa nzvimbo inokupa iwe kuzara kwekuchengeteka.
Solid huni inotungamira njanji ine yakasimba kusakara kuramba
Solid huni inotsvedza njanji, kadhi slots inotsvedza dhirowa, kudhirowa kudhirowa, mwenje uye wakanyarara, hazvisi nyore kusunungura, kusimba uye kupfeka kusagadzikana. Iyo kadhi slot yakatemwa zvakakwana, iyo dhizaini haina kunamatira, kuchengetedza nguva uye kushanda nesimba, uye nyore kutora.
Anoshanda zvinhu zvekuoma kwehuni kabati makumbo
Iwo makobvu akasimba ehuni huni makumbo akatsiga uye haana kutsvedza, akasimba uye akasimba Tevedza dhizaini dhizaini yekamuri rese uye dhizaini seti yematanho ekufananidza eimba yako yakanaka nechinangwa chemafashoni uye akasiyana siyana. Iyo yepasi ine isina-kutedzemuka uye yekupfeka-isingagadzirike dhizaini, izvo zvinoita kuti zvive nyore kupusha uye kudhonza. Izvo hazvizokanganisa zvakasara zvevamwe, kuchengetedza pasi uye kuwedzera hupenyu hwebasa rekhabhineti.
Pashure: Inflatable kudhirowa yoga matanzi ejimu mat inflatable air track 0384
Zvadaro: Oak Wadhirobe Silent Damping Slide Rail Sliding Door Wadhirobe Yekurara Midziyo # 0108
Bohn Hut Akaumbwa Nematanda Pet Imbwa Imba
Unitarp Inotenderera Inflatable Yoga Mat Vakuru Swi ...
Yemazuva Nyore White White Oak ChiJapan Style Yakabatanidzwa ...
Makore mana Wicker Warm Wakawanda Multifunctional Pet Be ...
White Oak Multifunctional Kaviri Mubhedha Solid Wood ...